Igumbi lesitudiyo eline-wifi esheshayo, phezulu&indawo yokupaka mahhala. - I-Airbnb
Igumbi lesitudiyo eline-wifi esheshayo, phezulu&indawo yokupaka mahhala.
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Soumya
Igumbi le-studio elithokomele linombhede wenkosi, ikhishi elilungele abantu abangu-2. Indawo yokungena ehlukile(i-WFH friendly UPS isekelwa i-inthanethi enesivinini esikhulu, amanzi ashisayo elanga, Ikhishi) elinamathiselwe ngokuluhlaza okotshani okukhulu okuvulekele i-sky Balcony - ingadi, phezu kompheme wengadi ethokomele. indlu. Eduze kwaseSecundrabad.
Inesikhala se-cum yoga, phakathi kohlaza olunethala. Phumula futhi uvuselele endaweni eyingqayizivele ephakamisa umphefumulo. Eduze kakhulu nezindawo zokudlela zekilasi, amathilomu, izindawo zokudlela. Uma kucelwe ngaphambilini ukudla okwenziwe ekhaya kuyatholakala
*I-inthanethi ye-Wifi High speed isekelwa yi-inthanethi
* I-TV ene-Firestick
* isibuko sokugqoka
Ukuphepha kwe-Ur yinto esisikhathazayo -- sinama-CCTV. Jabulela izinkomishi zakho zekhofi ezishisayo ekuseni ngephepha, ngemva kwe-yoga evulekile esibhakabhakeni nokuhlala endaweni engasese, phakathi nomoya oheleza kamnandi nezinyoni ezitshiyozayo. Kokudla kuwena, sihlinzekwa kahle ngabakwa-Swiggy kanye ne-Zomato - Hlola i-gastronomy ecebile nehlukahlukene, ewina umklomelo yase-Hyderabad (Sicela usibuze izincomo).
4.87 · 39 okushiwo abanye
Indawo Ilungele ukungcebeleka nabahambi bebhizinisi. Ungakwazi ukuphumula futhi uvuselele endaweni eyingqayizivele ephakamisa umphefumulo, ngemva kosuku olumatasa. Eduze kakhulu nezindawo zokudlela zekilasi, amathilomu, izindawo zokudlela kanye nezindlela zokuthenga.
Kukhona ipaki enkulu yokuhamba ngezinyawo enepaki yezingane ehlomele kahle nje imizuzu emi-3 ukusuka.
Igumbi likhulu futhi iVeranda inkulu nakakhulu. I-Comfortable for 2. Leli gumbi linombhede olingana nenkosi.
Indawo enikeziwe iqoshwe ukuze uthole okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka, ngemva kokuphuma emsebenzini wosuku
Sisize ngezibuyekezo / impendulo yakho, bese ubuya futhi.
Ngihlala ngitholakala ocingweni futhi umndeni wami uhlala esitezi esiphansi, ukuze uthole i-HELLOOO enobungane nosizo.